Hal Qof Oo ku dhintay Dad shacab ah oo ku qamaamay Sanaaduuqda Doorashadda Lughaya | Somaliland.Org
Sidaasna waxa shabakada wararka ee Somaliland.Org u xaqiijiyay Weriyeyaal ku sugan magaaladda oo gaadhay goobta dilku ka dhacay.
Laba qof oo kale oo mid dhaawaciisu culus yahay ayaa iyaguna ku dhaawacmay rasaastaasi.
Siday wararka ka imanaya magaaladda Lughaya sheegayaan waxa khasaarahani ka dhashay markii dad badan oo shacab ahi ay ku qamaameen goob la dhigay sanaaduuqda Doorashadda deegaanka, kuwaasi oo shaqaalihii Komishanka ka dalbanayay inay qeybiyaan sanaaduuqda oo ay goobo kala duwan geeyaan. Taasna ay diideen hawl wadeenaddii komishanku, ka dibna askarigaasi ayaa rasaas uu doonayay inuu ku kala kaxeeyo ku riday dadkaasi ku qamaamay goobtaa. Hase yeeshee ay rasaastaasi ku dhacday sadexdaasi qof oo midina dhintay labana dhaawacmeen.
Previous PostGuddoomiye Ku xigeenkii XAQSOOR Ee La Afduubay Oo Saaka Waabarigii soo Gaadhay LaascaanoodNext PostDakhtarkii ugu horeeyey ee sameeya in dadka unugyadda jidhka loo kala bedelo oo geeriyoodey	Blog